Archive du 07-juin-2021
Ny teo ihany no eo
Ny tanana zatra mitsotra, hono, tsy afa-mivonkona intsony. Misy koa ilay fomba filaza iray izay hoe kolontsaina raiki-tapisaka.
Mpangarom-paosy anaty taxibe Efa fantatry ny mpamily sy ny resevera ny ankamaroany
Mirongatra sy mahazo vahana ireo mpangarom-paosy any anaty taxibe eto an-drenivohitra tato ho ato.
Ambilobe Saika namidiny tamin’ny vazaha ny zanany
Zava-doza no saika nitranga tany amin’ny distrikan’Ambilobe. Zazalahikely iray vao 8 taona monja no saika namidin-drainy
Ady amin’ny Coronavirus Ho sarotsarotra ny fahazoana vaksiny manaraka…
Nanomboka ny 10 mey ny fanaovana vaksiny ho an’ny sokajin’olona marefo, ireo mifandray sy mifanerasera mivantana amin’ny vahoaka toy ny mpitandro
Fanenjehana an-dRavalomanana Hampitombo ny fitiavan’olona an-dRajoelina ve ?
Mandany andro sy fotoana amin’ny fanenjeana an’i Marc Ravalomanana ny Fanjakana tarihin’ny Filoha Rajoelina. I
Mahitsy Nahazo kianja filalaovam-baolina manara-penitra
"Vita hatreo ny baolina ambony vovoka. Toraka izany koa ny baolina an-tanimbary ho an'ny tanoran'i Mahitsy",
Antananarivo Miha ratsy ny tsena ho an’ireo mpivaro-kena
Toy ny nandatsa azy ireo ny fandehan’ny tsenan’ireo mpivaro-kena teto an-drenivohitra tamin’ny faran’ny herinandro teo.
Naivo Raholdina Resy lahatra tamin’ny vaksiny
Nanao vaksiny tetsy amin’ny Hopitaly HJRA ny Depiote voafidy teny amin’ny Boriborintany faha-5 Atoa Naivo Raholdina mivady ny faran’ny herinandro teo,
Fepetra ara-pahasalamana Maro be sahady ireo tsy manao arovava oroma
Maro be sahady ireo olona tsy manao arovava orona hita mandehandeha eny amin’ny arabe nanomboka ny sabotsy teo,
Filankevitry ny Governoran'ny Faritra "1er tour" dia vita ...
Notanterahina ny 15 oktobra 2020 ny filankevitry ny minisitra voalohany natao ivelan’Antananarivo.
Lakana rendrika tao Salary Mpandeha 3 namoy ny ainy, 3 mbola karohina
Lakana iiray mpitatitra olona, mandeha milina, mirefy 8m ny halavany sy 0,70m ny sakany rendrika tany an-dranomasina ny sabotsy 5 jona 2021
Hetsika nandritra ny iray volana Frantsay sy Eoropeana 1.700 no vita vaksiny
Efa nahatratra 1.700 sahady hatreto ny isan’ireo tera-tany vahiny Frantsay sy Eoropeana efa vita ilay vaksiny Johnson & Johnson
Mpanjono Malagasy miisa 4 Natosiky ny andro ratsy hatrany Kaomoro
Ny 17 mey teo no niainga tao Nosy Be ny 4 mirahalahy ireto nikasa hanjono, raha ny fampitam-baovao voaray.
Andry Rajoelina Manao pi-maso amin’i Penjy
Nanolotra kamiao sy dabam-pako maromaro ho an’ny Kaominina Ivato, Distrika Ambohidratrimo ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina.
Ambodirano Androndrakely Vehivavy roa no tompon’antoka tamin’ilay vaky trano
Vehivavy miisa roa no fantatra fa tompon’antoka tamin’ilay vaky trano niseho teny Ambodirano Androndrakely andro vitsy lasa izay.
Tence Mena Miala any ny “Tsy maty ny mosavy”
Mbola ho fanamafisany hatrany ny herin’Andriamanitra manoloana ireo zava-dratsy maro miseho eto amin’ity tany ity